Iyo tvOS 11 yeruzhinji beta yave kuwanikwa | IPhone nhau
Kusvikira yekupedzisira kiyi yekupedzisira, Apple yeruzhinji beta chirongwa, yaingobvumidza vasiri-vagadziri vashandisi kuisa iyo iOS uye macOS inoshanda system mubeta. Kunyangwe chiri chokwadi kuti kusvika nezuro, beta yekutanga yeIOS 11 haina kuwanikwa kune veruzhinji Pakazara, Tim Cook akazivisa kuti Apple TV inoshanda sisitimu zvakare ichave chikamu cheichi chirongwa chebeta.
Iyi yeruzhinji beta chirongwa Inototipa yekutanga beta yeiyo inotevera vhezheni yeApple TV inoshanda sisitimu. Kugonesa iyi shanduko, Apple yafanirwa kuchinja nzira iyo vanogadzira vakaisa mabheta kusvika zvino.
Parizvino, kana mugadziri aida kuisa chero beta yeTVOS vaifanira kubatanidza Apple TV kuMac uye kurodha pasi beta kuburikidza neTunes uye kuiisa. Iye zvino nzira yachinja uye iri nyore, nekuti isu tinongofanirwa kusaina chirongwa cheApple yeruzhinji beta, uye kusaina neiyo imwechete ID ID yakanyoreswa paApple TV. Tevere tinoenda kune Apple TV inogadziridza uye sarudza Tora mabheji epachena kuti utange kurodha pasi uye nekumisikidza inotevera.
macOS Yakakwira Sierra uye watchOS 4 haisati yawanikwa mune yeruzhinji beta
Nezuro vazhinji vaive vezvenhau vaive vakazvipira kunyora zvinyorwa pa kuwanikwa mune macOS Yakakwira Sierra uye watchOS 4 yeruzhinji beta chirongwa, ruzivo rwanga rwuri rwekunyepa, sezvo vanga vasina kunetseka chero nguva kuti vawane chirongwa cheveruzhinji beta kuti vazvionere. Kutanga, Apple haina kuronga kuisa iyo Apple Watch inoshanda muchirongwa chevoruzhinji, nekuti hapana nzira yekudzikisira kana chimwe chinhu chikatadza panguva yekuita kana kana kushanda kwe beta kuchimanikidza kudzokera kuiyo vhezheni yapfuura. .
MacOS Yakakwira Sierra haisati yaburitswa mukati meveruzhinji beta chirongwa Panguva yekunyora, Apple yakatoburitsa mabhatas maviri akasiyana, izvo zvinoratidza kuti mashandiro eMacs achiri akasvibira kuti aise muchirongwa ichi. Shamwari dze soydemac.com Ivo vachatizivisa nekukasira uye zvine chokwadi kuti yekutanga macOS High Sierra yeruzhinji beta ichaburitswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple tv » Iyo tvOS 11 yeruzhinji beta yave kuwanikwa